Fampiasana fakantsary miady amin'ny vatana amin'ny Indostria | Vahaolana OMG
Ny fampiasana fakantsary vatana amin'ny Indostria toy ny varotra varotra, fivarotana varotra, fitantanam-bola, fiantohana, fambolena, fananganana, fanamboarana harena ankibon'ny tany, fitaterana, serasera, herinaratra, entona, serivisy fanadiovana, ary serivisy fananana trano dia azo lazaina fa ilaina amin'ny ora iray. Ireo indostria ireo dia nanomboka nanangona ireo mpiasan'ny fiarovana amin'ny fakan-tsary mitazona vatana amin'ny ezaka mba hiarovana ny orinasan'izy ireo amin'ny fanararaotana sy fanafihana avy amin'ny vahoaka.
Ny fandinihana ny fampiasana fakantsary maotina amin'ny vatana dia milaza fa misy fahasamihafana lehibe eo aorian'ny sy talohan'ny antontan'isa fanararaotana, herisetra, ary fandrahonana amin'ireo orinasa voalaza etsy ambony. Maro ireo tompon'andraikitra no nanolotra fakantsary fitaovam-batana ho fitaovana fanamboarana izay namaha ny olan'izy ireo. Eto dia miresaka momba ny fampiasana fakantsary fitafiam-batana ataon'ireo indostria ireto ireto manaraka ireto:
Varotra varotra sy varotra:
Ny fahombiazan'ny fakan-tsary mifono vatana amin'ny maha-teknolojia fampiharana ny lalàna dia manan-danja ho an'ny mpiaro ny trano fivarotana varotra sy mpivarotra. Nanomboka nameno ireo mpiambina fiarovana amin'ny fakantsary fiakanjo akanjo ny mpivarotra toa an'i Wal-Mart's UK mba hiarovana ny orinasan'izy ireo amin'ny fanararaotana sy fanafihana avy amin'ny vahoaka.
Ny sekretera jeneralin'ny Union of Shop, Distributive and Workers Workers any Manchester, dia nilaza i Paddy Lillis fa tsy isalasalana fa ny fakantsary fiakanjoam-paty dia manana fihenan-kevitra manelingelina ary tena manohana ny fepetra tahaka izany mifantoka amin'ny fampihenana ny fandrahonana, ny herisetra, ary ny fanararaotana any am-piasana.
Nanamarika ny USDAW fa ny fanadihadiana nataon'ny mpiara-miasa amin'ny fivarotana dia manondro ny fitomboan'ny herisetra 25% mihoatra ny fanafihana 230 amin'ireo mpiasa mpivarotra United Kingdom.
Ny mpivarotra fakantsary iray dia tsy mahatsikaritra ny fahasamihafana misy eo amin'ny fampiasana fakantsary vatana amin'ny fampiharana ny lalàna sy ny fiarovana ny fitehirizana. Ny tanjona voalohany amin'ny fakan-tsary mitazona vatana dia ny mampihena ny herisetra amin'ny mpiasan'ny fakan-tsary, manome porofo ny fifaneraserana raisina mba hanaiky na hanohitra ny fiampangana rehetra ary manome fomba fijery tsy miangatra sy tsy miangatra.
Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia dingana iray alohan'ny fakantsary CCTV satria tsy misy feo ny farany. Ny fakantsary vita amin'ny vatana dia manome fanohanana fanampiny sy fahaizana manangona porofo satria maka feo sy horonan-tsary izy ireo.
Ny fampiasan'ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana amin'ny orin'asa toy ny mpivarotra, hôpitaly, fanatanjahantena ary fialamboly dia tsy dia nampihetsi-po be ny fananganana azy. Vakio i Hayes, mpahay siansa mpikaroka ao amin'ny University of Florida fa fantany ny fivarotana any Etazonia izay mampiasa fakan-tsary amin'ny vatana nefa mandà ny tsy hilaza ny anaran'ny orinasa izy.
Ny ekipan'i Hayes izao dia miara-miasa amin'ny mpivarotra mba hamolavola fanandramana izay misy mpiasan'ny toeram-piantsenana toy ny mpiambina ny mpiambina ary ny mpanangona sarety no mitondra fakan-tsary mihetsika eo amin'ny fivarotana. Hodinihin'izy ireo momba ireo mpiara-miasa tsy mihetsika amin'ny fakantsary tahaka ny fivarotana toy ny toeram-pivarotana sy ny toeran'ny mpanjifa, ny fampitahana ohatra, matetika ny fangatahana mpiasa ho fanampiana na fampahalalana, ny isan'ny fitarainana sy ny tranga tsy fitovian-kevitra. Hayes dia nilaza fa tokony hitranga amin'ny telo ka hatramin'ny enim-bolana manaraka ity fitsapana ity.
Raha fintinina, ny fampiasana fakan-tsary mitazona vatana dia nanaporofo fa nanampy tamin'ny fampihenana ny herisetra tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Ny efamira fiasan'ny mpiasan'ny mpiasa any Skotlandia dia mitondra fakantsary fitondra-doha. Tamin'ny faran'ny fikarohana dia voaporofo fa ny olona manana fakan-tsary mifono vatana dia miharihary fa tsy dia ratsy loatra avy amin'ny vahoaka. Toy izany koa, ny City Center Management any Belfast, Northern Ireland, dia andrana iray hafa ihany koa no natao tamin'ny toerana fivarotana lehibe ary vokatr'izany dia nihena ny 43%. Ireo valiny ireo dia mampiseho fa ireo fakantsary fitafy vatana dia mitondra fanovana lehibe amin'ny fampihenana ny herisetra.
Ny fahombiazan'ny fakan-tsary mifono vatana amin'ny maha-teknolojia fanaraha-maso dia zava-dehibe ihany koa ho an'ny endrika fambolena sy mpiambina ny zaridaina hanamarina ny halatra sy ny mpandika lalàna. Ny orchards dia misy fandrahonana foana ataon'ny mpangalatra izay manandrana mangalatra voankazo. Ramatoa Patricia Corcoran no tompon'ny fambolena frezy any Kalifornia. Nanome fakan-tsary mifono vatana ho an'ny mpiambina azy izy satria matahotra ny halatra. Tsy ireo fakantsary fiakanjoam-paty ihany no namantatra ireo mpangalatra fa koa fangalarana ny halatra avy any amin'ireo santsadiny.
Mahasoa ihany ny mijery tsara ireo mpamboly satria ny fakantsary CCTV dia tsy afaka mirakitra feo raha ny fakantsary fiakanjoana dia afaka maka sary an-tsary sy horonan-tsary. Misy ny mety ho voarohirohy ho an'ny mpangalatra sy ny fitondran-tena ratsy isan-karazany. Raha manitsakitsaka ny zaridaina na ny toeram-piompiana sy fambolena ny mpanota iray ary manandrana mangalatra na manimba dia afaka mamantatra ilay mpandika lalàna ny fakan-tsary.
Ny fikarohana mifototra amin'ny hevitry ny tantsaha sy ny tantsaha dia manondro fa ny fampiasana fakantsary fiakanjo vatana dia mihena ny isan'ireo trangan-javatra tsy voatanisa ao amin'ny toeram-piompiana sy fambolena.
Nankasitraka an-dRamatoa Patricia Corcoran ny fahaizan'ny fakantsary vita amin'ny vatana amin'ny fanomezana valiny tadiaviny satria efa nanahy ny momba ny olana amin'ny halatra ao amin'ny toeram-panjakànany izy. Manoro hevitra ny mpamboly hafa izy mba hampiasa fakantsary fitafiam-batana mba hijerena ny asan'ny mpiasa an-tsaha ary hijerena ny halatra.
harena ankibon'ny tany:
Indostria tena mampidi-doza ny fitrandrahana ary miatrika zava-tsarotra maro ny zaza tsy ampy taona mandritra ny andraikiny ary indraindray miharihary ny fiainany. Ary toy izany koa, ny orinasa mpitrandraka dia miatrika atahorana ho fiarovana betsaka izay mety hanamaivana ny fanaraha-maso ny horonantsary. Ny fampiasana fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia manamaivana ny risika fiarovana amin'ny sehatry ny fitrandrahana.
Ny Security Camera Security dia manampy amin'ny fomba manaraka:
* Manome antoka ny mpiasa hanaraka ny kaody fiarovana
* Manalavitra ny halatra sy ny vaky simba
* Manara-maso ny fanodikodinana ny fako
* Manakana ny mpandika lalàna sy olona tsy nahazo alalana hiditra
* Mamela ny fizahana finday hijerena akaiky ny tranonkala
* Misambotra fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fiarovana sy fiarovana
* Manome sary mazava momba ny toerana fitrandrahana
* Araho maso ny antony mahatonga ny lozam-pifamoivoizana
Henontsika rehetra ary tena mino fa tena ilaina ny fiarovana. Amin'ny sehatry ny asa fanamboarana indostria dia ilaina ny fiarovana ny tsirairay. Ny fanadihadiana momba ny fiarovana amin'ny indostrian'ny fanamboarana dia mitaky fotoana be ary matetika dia miankina amin'ny fahazoana angon-drakitra marina avy amin'ny mpiasa na voakasika na mijoro ho vavolombelona amin'ny fisehoan-javatra mitranga ao an-toerana. Ny iray tamin'ireo namanay no nilaza tamiko fa nanao ny fanandramana ny fampiasana Camera Camera ho an'ny fananganana azy ny orinasany. Vondron'olona vitsivitsy avy amin'ny 5 ka 10 olona. Ny tanjon'ny fanandramana dia ny nahazoana zava-misy sy tarehimarika momba ireo tranga maro samihafa izay mitranga ao amin'ny Indostrian'ny fananganana. Ny orinasa dia hanana ny fijoroana ho vavolombelona momba ny mpiasa sy ny rakitra / horonan-tsarimihetsika momba ny zava-nitranga nandritra ny hetsika rehetra fananganana tranobe.
Mahalana ny orinasa mpanao trano no manamboatra andrana toy izany. Ilay andrana voalaza etsy ambony dia nahitam-bokatra tokoa mba hahazoana traikefa sy handraisana fepetra fiarovana bebe kokoa. Manokatra boaty fanontanian'i Pandora vaovao ao amin'ny tranokalan'ny sendika ity izay manara-maso ny sary sy ny lahatsarin'ny mpiasa ary misy fiantraikany amin'ny zon'ny mpiasa mila dinihina. Ity fikarohana momba ny mpiasa 5 ka hatramin'ny 10 amin'ny orinasa mpanao trano ity dia manondro fa ny fampiasana fakantsary mitafy vatana dia tena ilaina amin'ny indostrian'ny fananganana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana BWCs, azontsika atao ny mamantatra ny fikorontanana izay manohintohina ny fiarovana ireo mpiasan'ny fananganana.
Ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia manana anjara toerana lehibe hanaraha-maso ny orinasa mpanamboatra. Ny fahitanao ny trano fitehirizanao na ny orinasa mpanamboatra trano dia mandeha lavitra rehefa misy olana ny fiarovana. Rehefa manara-maso ny orinasa mpanamboatra anao ianao dia manatsara ny fampiratiana azy io satria mijanona eo ambany fanaraha-maso foana io. Ny fakan-tsary amin'ny vatan'ny mpiasa amin'ny orinasa mpanamboatra orinasa dia afaka manalefaka ny halatra sy ny heloka hafa. Azonao atao ny manamarina ny fahasimbana sy ny fatiantoka hafa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso amin'ny fakan-tsary vita amin'ny vatana. Rehefa misy olona mahafantatra fa eo ambany fanaraha-maso fakantsary dia manalavitra ny fanaovana heloka bevava izy. Ankoatr'izay, miaraka amin'ireo fakantsary avo lenta, na dia manandrana manao heloka bevava ao anatin'ny orinasa mpanamboatra olona aza ny olona iray, dia afaka misintona ny asany rehetra izy. Amin'ny alàlan'ny fandrakofana 24 / 7, dia ho fantatrao foana izay zava-mitranga ao amin'ny trano misy anao, anisan'izany ny toerana marobe amin'ny fotoana rehetra.
Miaraka amin'ny fanaraha-maso ny famantaranandro, azonao atao ny mijery na ny fatiantoka mifandray amin'ny asan'ny asa dia noho ny tsy fitandreman'ny mpiasan'ny mpiasa, tsy manaraka ny protocols, ny fitaovana diso, sy ny sisa. Na dia mitandrina 100% tsara aza ny olona rehetra ao amin'ny orinasanao, dia mety mbola hitranga ny lozam-pifamoivoizana ary ny fahazoana fakantsary fiarovana amin'ny fitrandranon'ny orinasa anao dia tsy hitondra fiadanam-po fotsiny fa hihena koa ny vidin'ny fiantohana.
Rehefa eo ambany fanaraha-maso ireo fakantsary vita amin'ny vatana ny mpiasa sy mpiasan'ny fiarovana ao amin'ny orinasa mpanamboatra orinasa dia hiezaka hanao asa tsara kokoa izy ireo. Amin'izany fomba izany, dia afaka manatsara ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny orinasa famokarana ao amin'ny orinasanao ianao.
Collin Green, Security Manager for Southern Railway, United Kingdom dia nanjary nahatsapa fa ilaina ny manana fitaovana iray izay manelingelina sy ny ilàna fanangonana porofo rehefa mandeha ny fifamoivoizana. Noho io antony io, dia nanao fikarohana izy ary nahita haino aman-jery izay manana ilay tadiavinay. Nahita fakantsary maotina tena ilaina ho an'ny departemanta izy. Nataony hoe mahasoa tokoa ny manara-maso ireo hetsika ao amin'ny departemanta misy azy ireo. Rehefa nifehy ny biraon'ny sampana fiarovana ny Southern Railway i Mr. Colin Green, dia nitantana ekipa iray amin'ny Rail Neighborhood i United Kingdom izay niasa tamin'ny lamasinina sy fiantsonana tany Atsimon'i Angletera. Andriamatoa Colin dia mijery ny fahaizan'ny fividianana fakantsary vita amin'ny vatana bebe kokoa amin'ny ho avy mba hahatonga ny fitaovana ho fiheveran-tena manokana.
Ilaina ny famatsiam-bola avy amin'ny tamba-jotra tambajotran'ireo fakan-tsary amin'ny toerana voalohany. Nanomboka nampiasa ny fakan-tsary tao amin'ny Railway izy ireo.
Inona no fahasamihafana entin'ny fakan-tsary vita amin'ny vatana ao amin'ny Railway?
Nitombo ny fahitana miaraka amin'ny fakantsary. Ny mpiasan'ny fiarovana Railway Southern dia mitondra palitao mitovy amin'ny palitao fanamiana polisy. Indraindray dia mety hiatrika fanamby izy ireo rehefa miady amin'ny olona mahery setra na mamo. Tsikaritr'izy ireo ny fahasamihafan'ny fihetsiky ny olona satria rehefa ny fahatsapan'ny daholobe dia manakana ny fanao tsy marina. Ny fotoana voalohany nampiasain'ny horonantsary ho porofona rehefa naneho horonan-tsary tamin'ny olona iray voakasik'izany izy ireo, voasazy ho faty, dia nahazo ny fanamarihana sazy.
In ny vanim-potoanan'ny teknolojia dizitaly ankehitriny, ny fikambanan'ny fifandraisana, toy ny AT&T, T-Mobile, Verizon Communication, Charter Communication, sns any Etazonia dia mila fanaraha-maso fakan-tsary mba hanatsarana ny fahombiazan'izy ireo. Na dia manana ny maha-zava-dehibe azy aza ny fakan-tsary CCTV, dia afaka maka sary sy manome fanaraha-maso horonantsary ihany izy io raha toa ka manana ny toerany eo amin'ny fomba fijery azo antoka ny fakan-tsary mitafy vatana. Manome rafi-panaraha-maso horonantsary avo lenta miaraka amin'ny firaketana feo sy horonan-tsary izy ireo. Ireo fitazonana ireo zava-misy ireo amin'ny orinasa jerena toa ny Charter Communication, AT&T, Verizon Communications, sns. Dia mikasa ny hanatsara ny fahafahan'ny fiarovana ny orinasan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanomezana fakan-tsary ho an'ny mpiasan'izy ireo.
Mobilink dia orinasam-pifandraisana malaza any Pakistan. Zava-niseho tamin'ny halatra no nitranga tao amin'ny frank'i Faisalabad. Nisy olona nandroba tariby, saingy tsy afaka nanome porofo ny mpiambina satria tsy nanana fakantsary miakanjoana izy ireo. Ity ohatra ity dia manondro hoe ilaina ny orinasam-bolo amin'ny vatana ho an'ny orinasam-pifandraisana.
Electric Tena mampidi-doza ny fametrahana, satria na ny fiambenana kely fotsiny aza dia mety hahavelona aina ny tsirairay. Ny fahombiazan'ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana amin'ny maha-teknolojia fanaraha-maso dia zava-dehibe ho an'ny departemanta elektrika ihany koa.
Ny tombony azo amin'ny fampiasana fakantsary vita amin'ny vatana amin'ny orinasa Electric:
Avelao ny mpiasa hanaraka ny fitsipika momba ny fiarovana mandritra ny ora fiasany satria na dia ny fikarakarana kely fotsiny aza ataon'ireo mpiasa dia mitondra fahavoazana lehibe ho azy ireo. Ny manamarina tranga iray lehibe dia ilaina ny hanaraka ny fitsipika sy ny fepetra rehetra momba ny fiarovana.
Avelao ny mpanota sy ny olona tsy nahazo alàlana tsy hiala amin'ny fanapahana ny orinasan'ny herinaratra mba tsy hanara-maso ny fahavoazana fotsiny fa mba hiarovana azy ireo amin'ny fametrahana herinaratra mampidi-doza ihany koa.
Hanara-maso ny mpiasa na izy manaraka ny fitsipiky ny orinasa na tsia
Jereo tsara ny fanodikodinana ny fako
Aza atao ny fangalarana sy fanimbana
Zahao maso ny fitaovana fako
Avelao jerena ny fijerena finday ho an'ny tranonkala eny ivelany
Manara-maso ny antony mahatonga ny loza sy ny fatiantoka hafa
maro ny firongatry ny teknolojia no mitondra ny tsenan'ny entona sy ny solika. Exxon Mobil ilay orinasa ambony solika sy entona any Etazonia dia nanome fakan-tsary mifono vatana ho an'ny mpiambina sy ny mpiasan'ny taniny. Ny tanjona ao ambadiky ny fanaraha-maso fakan-tsary dia ny fampitomboana ny fahombiazan'ny filaminana, ny fitazonana hatrany ny mpiambina eny an-tsaha. Amin'ny alàlan'ny fakan-tsary amin'ny alàlan'ny fiarovana sy ny mpiasa eny an-tsaha dia tadiavin'ny orinasa hanaraka tanjona:
Miantoka ny lalànan'ny fiarovana
Miaro ny mpandika lalàna sy ny olona tsy nahazo alalana tsy handray anjara amin'ny sehatry ny sehatry ny solika
Manara-maso ny mpiasa raha manaraka ny fitsipiky ny orinasa na tsia
Mahazo sarinà famokarana entona
Manamarina fanodinana fitaovam-pako
Fialana amin'ny fangalarana sy fanimbana
Miambina ny fitaovana fako
Mamela ny fijerena finday ho an'ny maso tsy misy tranonkala
By fampiasana fakantsary vita amin'ny vatana amin'ny serivisy fahadiovana, ny fepetra anatiny amin'ny mpanjaitra ara-pahasalamana sy ny serivisy serivisy azo jerena ary zahana mandritra ny fakana sary amin'ny fotoana tena izy. Hainao avy hatrany ny olana sy ny toetrany.
Ohatra, CASA Sanitary Wares Factory, Canada dia nanome fakan-tsary vita amin'ny vatana ho an'ny teknisianina sy ny mpiasa hafa tamin'ny fotoana niasan'izy ireo. Nahazo tombony tamin'ny fakan-tsary niakanjo vatana izy ireto manaraka ireto:
Amin'ny alàlan'ny fampiasana BWC amin'ny fisafoana fantsom-potoana, dia manangona data avo lenta izy ireo izay azo ampidirina ao ary manome toerana akaiky ny faritra nokendrena. Aorian'ny fisafoana dia hanome tatitra an-tsoratra sy horonantsary avo lenta izy ireo. Tamin'ny faran'ny andro dia nomen'izy ireo angon-droa mahasoa tsy azo atao raha tsy misy ny fampiasana an'io teknolojia farany io.
Torak'izany koa, nisy fisavana iray taty aoriana dia nalain'ny fakantsary maotina Body. Ho an'ny tsipika mpanamboatra mampifandray ireo trano sy orinasa amin'ny rafi-bolan'ny afovoany. Ireo fisafoana ireo dia nanome teknika azo ampiharina mba hijerena ireo fisakanana, sakam-baravarana na fahasimbana Tamin'ny alàlan'ny fantsom-pandehanana nitafy vatana, dia nanolotra tatitra mahomby izy ireo momba ny fanakoranana, ny lakroa ary ny fahavoazana.
Ny fikojakojana ny manhole mety dia zava-dehibe amin'ny fanangonana rafitra fanaingoana rafitra. Ny orinasa dia nanara-maso sy nanombatombana ireo fotodrafitrasa nalevina maro isan-karazany, ao anatin'izany ny famoahana sns .. amin'ny alàlan'ny fakan-tsary vita amin'ny vatana. Nanome porofo momba ny fanombanana azy ireo izy ireo noho ny fanampian'ny fakan-tsary vita amin'ny vatana.
Noho izany, ny serivisy fahadiovana koa dia manomboka mifamatotra amin'ny fakantsary vita amin'ny vatana mba hampitomboana ny fahombiazany.
Financial fikambanana toy ny banky no hita ho andrim-panjakana miaro indrindra eto ambonin'ny tany. Atokinay ny volantsika, ny firavaka sy ny tahirin-kevitra lehibe amin'ny alalàn'ny azy ireo. Noho izany, ilaina ny rafitra fanaraha-maso horonantsary ambony indrindra amin'ireo andrim-panjakana ireo. Miaraka amin'ny fanavaozana misy ankehitriny amin'ny teknolojia nomerika sy ny IP, maro ny banky no manantena ny hanamafisana ny fahombiazan'ny rafitra fiarovana amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola amin'ity teknolojia vaovao ity.
Tombontsoa azo avy amin'ny fakan-tsary mifono vatana amin'ny Banks sy andrim-panjakana hafa:
Notohizan’ireo banky hatrany ireo jiolahy nitady vola be. Ny fanaraha-maso fakan-tsary fanamboarana fakan-tsary mety ho an'ny banky dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny halatra.
Raha resaka fangalarana sy fisolokiana voarakitra fakantsary azo raisina dia azo ampiasaina hamantarana ireo olona voarohirohy.
Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana sy ny rafitra fanaraha-maso fakan-tsary CCTV miaraka amin'ny alalàn'ny fandalinana horonantsary mandroso toy ny fanekena ny tarehy dia manampy amin'ny fiatrehana ny olan'ny fisolokiana fisavana amin'ny banky amin'ny alàlan'ny firaketana ny angon-drakitra fitadiavam-bola ary ny fakana sary an'ny olon-dratsy. Ity fampahalalana ity dia ilaina hanekena ireo mpanao heloka bevava ary manampy amin'ny fiarovana ny kaonty mpanjifa.
Ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia afaka mampitombo ny fahatokisan'ny mpanjifa amin'ny banky. Arakaraka ny arovan'ny banky dia ny mpanjifa mahatoky kokoa. Ny rafitra fanaraha-maso amin'ny horonantsary amin'ny banky mahomby amin'ny alàlan'ny fakan-tsary tsy misy hatak'andro sy ireo fakan-tsary CCTV dia manaporofo tena mahasoa.
Fakan-tsary miakanjo lasa ampahany amin'ny departemanta rehetra. Saika ny orinasa tsirairay dia miezaka hampifanaraka izany amin'ny fanaraha-maso ny mpiasa ao.
Tahaka izany koa, ny orinasa fiantohana dia manandrana mampiasa firaketana horonantsary voafandrina amin'ny fotoana nitrangan'ny tranga mba hanaporofoana na tsy ekena ny andraikitra, ary handeha lavitra mihitsy aza izy ireo mba hiezaka hampiasa horonantsary fandraisan'ny olona iray ao an-tranony na eny amin'ny toerana be olona mba hanaporofoana fa nanohitra ny ratra nataony ilay olona. Noho izany, ny fahazoana fakantsary-body dia mitahiry vola be avy amin'ny fikambanana satria ny fakantsary vatana dia manaporofo raha toa ka mendrika ny hanome vola antoka io mpiasa io na tsia. Ity no asongadin'ny orinasa fiantohana amin'ny fampiasana fakantsary vatana.
Anisan'ireo fampiasana fakantsary fitaovan-doko hafa, raha avelanao hanome kaonty, ny orinasa fiantohana dia mety manao rakitsoratra ho azy ary mety hampiasa izany aminao amin'ny daty taty aoriana. Toy izany koa no mitranga amin'ny fivorian'ny olona raha misy fiantohana omen'ny fiantohana amin'ny fandaharam-pivoriana ho an'ny olona amin'ny fanantenana fa hamandrika anao hilaza zavatra manohitra ny fitakianao. Noho izany, tsy tokony hanao fanambarana na fanekena velively amin'ny fivoriana ianao raha tsy miresaka voalohany amin'ilay mpisolovava anao.
Serivisy Real Estate:
Ny fampiasana ny lamba vita amin'ny vatana Ilaina ihany koa ny fakan-tsary satria misy any amin'ny indostria hafa. Ohatra, i Annie Yee, mpiasa iray ao amin'ny fikambanana Real Estate, indray mandeha dia nahita ny tsy fetezana teo amin'ny biraony fa nisy mpividy iray nanandrana nanafika azy. Nijoro ho vavolombelona izy na dia eo aza ny fepetra rehetra momba ny fiarovana, dia nitaky ny fampiasana fakantsary raikitra tao amin'ny biraon'ny fikambanana Real Estate. Tsy vitan'ny hoe mahasoa ny manelingelina ny tranga toa an'i Annie Yee ihany fa ny fikambanana koa dia afaka manara-maso ireo hetsika maro ataon'ny mpiasa sy mpividy.
Notantarainay ny ohatr'i Annie Yee eto mba hanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny fampiasana fakan-tsary vita amin'ny Vatana. Volana volana oktobra izy io, na dia teo aza ireo fiarovana rehetra ireo, dia nanana fahatsapana nilentika izy rehefa norahonana rehefa nihaona tamin'ny olona iray hanehoana fananana. Ny mpanjifany nifandray tamina fotoana lava taminy. Tsy nahatsiaro tena i Annie ary nahatsapa ny teti-dratsy nataony ho azy. Taorian'izay dia nivoaka ny birao izy ireo hijery ny fananana. Niditra tao amin'ny tranobe manirery izy ireo. Izy kosa dia malina ka andeha an-tongotra foana ao aoriany ary manalavitra ny faritra ao an-tokantrano ahafahany misintona azy. Nandritra izany fotoana izany, niditra tao anaty efitrano iray izy. Rehefa niditra tao amin'ny efitrano ity dia nanenjika azy ny olona ary niditra tao amin'ny efitrano saingy tsy nanaiky ny fisisihan'izy ireo ilay vehivavy. Notapahin'ilay olona ilay pataloha ary nandry teo am-pandriana. Nilaza i Annie Yee fa ny fampisehoana dia ampy ary nandao ny efitrano avy hatrany. Nampandre ny polisy avy hatrany izy ary nilaza ny fanadihadiana. Raha ny tati-baovao dia avy amin'ny anaran'i Michael Beat no nahafantarana azy. Izy dia voampanga tamin'ny fitondran-tena maloto, fikomiana ara-pananahana ambaratonga fahatelo, fikorontanana amin'ny fandriampahalemana.
Ity tranga ity dia manome lesona lehibe fa ny fampiasana fakantsary vita amin'ny vatana dia ilaina amin'ny indostrian'ny trano sy ny trano fananana rehetra.
Amin'ity fifanakalozan-dresaka ity dia nanandrana ny tombantomban'ny fakantsary raikitra amin'ny vatana izahay noho ny vokatry ny fandinihana sy fikarohana samihafa. Ny teny farananay dia fakantsary vita amin'ny vatana izay fitaovana farany izay manamafy ny fahaizan'ny fikambanana iray amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahombiazan'ny filaminana ary ny fahatokisan'ny mpanjifa.
Fampiasana fakantsary miady amin'ny vatana avy amin'ny Indostria no farany niova: Oktobra 10th, 2019 by Admin
3420 Total Views 2 Views Today